Soomaali (Somaliska) - SPV
Ku soo dhawow SPV
Guddiga oo dowlada sare oo qaabilsan lacagta shaqaalaha hawlgabka[Statens tjänstepensionsverk] (SPV) waa xafiiska ugu weeyn markey noqoto ka shaqeeynta arrimaha lacagta hawlgabka. Anaga baa mas’uul ka ah inaa siino dadkii ahaan jireen shaqale dowladeed lacagta hawgabka, oo dadkaas waxey garaayaan 800 000 oo shaqaale oo hada shaqeynaayoo iyo horey u shaqeyn jireen iyo 400 oo shaqo-bixiye.
Shaqada aan qabano waxaa kamid ah inaa xisaabino lacagta hawlgabka iyo saadaal iyo xisaab tirakoob u gudbinaa dowlada. Anaga hadafkeena baa wuxu yahay inaa ahaano doorashada koowad markey noqoto maamuleeynta lacagta hawlgabkeenta oo shaqaalaha dowlada. Xafiiska SPV wuxuu ku yaala Sundsvall oo 270 oo qof baa ka shaqeeyo xafiiska. Shaqada aan qabano waxaa kamid ah:
Inaa ka jaawaabno su’aalaha ey qabaan bulshada hawlgabka, shaqaalaha oo shaqo-bixiyaha.
Inaa xisaabino iyo soo dirno lacagta hawlgabka.
Inaa xisaabino deeynta lagu leeyahay shaqo-bixiyaasha.
Inaa warbixin, waxbarasho iyo siminaar isku soo dabaridno.
Inaa aqoon iyo taalo ku caawino markeey noqoto arrimaha lacagta hawlgabka.
Inaa u maamulno lacagta hawlgabka xafiisyada dowlada.
Su’aalo kusabsan hawlgabka
Adiga oo ah qof hawlgabk waxa soo waceysaa: 020-65 00 65
Adiga oo ah shaqaalo ama u shaqeeyn jiray dowlada soo wac: 020-51 50 40
Ma wadan kale naga soo waceeysaa?
Lambarkada ka bilaabanaayoo 020- wadan kale adiga oo joogtid ma soo wici kartid. Waxaa soo wacda lambarka xafiiska oo ah +4660-18 74 00 oo ayaga baa markaask u xiraayoo qeybta aad u baahantahay.
Sacadaha uu xafiiska furanyahay
Waqtiga jiilaalka: Isniin-jimco, sacadaha 08.30-16.30
Waqtiga xagaaga, juun ilaa ogost: Isniin-jimco, sacadaha 08.30-16.00